MIUI v5 GO - Nova - ဟိုလို - ADW Theme APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » themes » ADW Launcher ကို Themes » MIUI v5 GO - Nova - ဟိုလို - ADW Theme
MIUI v5 GO - Nova - ဟိုလို - ADW Theme APK ကို
ဤသည် GO / Nova / ADW / Apex / Atom / ဟိုလိုတင်ပေးသူနှင့်ပိုပြီးများအတွက် launcher ဆောင်ပုဒ်ပါ! ဒါဟာဂရပ်ဖစ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်များစွာသောလူကြိုက်များ launcher အစားထိုးဘို့အမြင့်ဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ် icon တွေကို add! အဆိုပါ icon တွေကိုသင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးမြှင့်ပေးစေခြင်းငှါအမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆကို Android Device များ (136 × 136) အတွက်ပြန်ဆိုရသည်။
။ 420 icon တွေကိုကျော်!
။ မူရင်း MIUI v5 font ကိုထည့်သွင်း!
။ ပါဝင်သည်မူရင်း MIUI v5 နောက်ခံပုံများ
။ သေးမပါဝင်သောအိုင်ကွန်များအတွက်5ထုံးစံနောက်ခံ
။ App ကိုအံဆွဲအဆင်ပြေအောင်
။ ပါဝင်သည် MIUI v5 folder ကိုဒီဇိုင်း
။ အမျိုးမျိုးသော launchers ထောက်ခံကြသည်!
todo သစ်ကို appdrawer အိုင်ကွန်စာရင်းပြုစု
။ (သာ Go ကိုဖွင့်တင်ထွအတွက်ထောက်ခံယခုအချိန်တွင်) အားလုံး launchers များအတွက်ထောက်ခံမှု appdrawer အိုင်ကွန်
။ (သာ Go ကိုဖွင့်တင်ထွအတွက်ထောက်ခံယခုအချိန်တွင်) အားလုံး launchers များအတွက်ထောက်ခံမှုနောက်ခံပုံများ
။ fix folder ကိုနောက်ခံ
။ GO Launcher ကိုဒြပ်စင် Rework
။ ပိုများသော icon တွေကိုအချိန်ကျော် iconpack ထညျ့သှငျးခံရဖို့များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ app ကိုအံဆွဲထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ icon တွေကိုတွေ့မြင်ပါသလား ကျွန်တော်တို့ကို E-Mail ကပေးပို့ပါ!
။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်နင်္ဂနွေနေ့တိုင်း update လုပ်လိမ့်မည်!
။ icons များ, mxHome နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စတင်ရန်-X ကို, Crazy မူလစာမျက်နှာ Lite ကို, dxTop Lite ကို, paid ပွင့်လင်းမူလစာမျက်နှာ, ပွင့်လင်းမူလစာမျက်နှာအခမဲ့, Paid VTL Launcher ကို, စက်ဝိုင်းဖွင့်တင်, Nemus Launcher ကို, Pro ကိုတင်ပေးသူ, Next ကိုတင်ပေးသူနှင့်ပိုပြီးပါစေ!
။ သငျသညျကိုအမေရိကန် -EMAIL ဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်! အလေးအနက်ထား, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့နှင့်သင်ကူညီပေးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
XHDPI ရည်ရွယ်သည်။ သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေအခြားသတင်းများ screen resolution နဲ့ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်
။ အဆိုပါ template ကိုများအတွက် DCStudi0
။ xda-developers.com မှာ MIUI အန်းဒရွိုက် v5 Miro Icons ချဲ့
မေလ 28, 2014 မှာ 10: 20 ညနေ